Ndị agha Eswatini na-elekọta ebe okwu SADC nwere ike ịbụ aghụghọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Eswatini Na -agbasa Akụkọ » Ndị agha Eswatini na-elekọta ebe okwu SADC nwere ike ịbụ aghụghọ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Crime • Eswatini Na -agbasa Akụkọ • Akụkọ Ọchịchị • News • Safety • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Isi akụkọ nke Times nke Swaziland na July 4 na-ekwu na ndị agha na-achịkwa
Ndị agha Eswatini nwere ike weghara ma yikarịrị ka ọ na-akwụsị ngagharị iwe niile, yana ndị nwere iwe iwe udo. Ọnọdụ ahụ dị jụụ ugbu a, mana ọ dị ka a ga-emechi morningntanetị n'ụtụtụ Mọnde.
Dabere na eTurboNews Isi mmalite ọnọdụ dị na alaeze nke Eswatini adala jụụ, ebe ịntanetị na -adịkarị ala.
Dabere na gọọmentị enyi na enyi nke Swaziland, ndị agha na-elekọta Alaeze ahụ n'oge a.
Ndị ozi SADC rutere Eswatini ma soro ndị isi gọọmentị na ndị otu na-ahụ maka okwu mkparịta ụka na Sọnde, ụfọdụ na-ahụ ya dịka mkpuchi ma ọ bụ ihe aghụghọ.
Otu onye ọrụ gọọmentị nọ n'ọkwa dị elu gwara ya eTurboNews:
Ndị nnupụisi ahụ dị aghụghọ ka ha bịara yi uwe ndị agha. Mbibi a buru oke ibu ma bịaruo ọnwụ iri atọ, ọkachasị ndị ahụ na-apụnara mmadụ ihe site n'ụlọ ahịa gaa zụrụ ahịa. Fọdụ ndị nwere ụlọ ahịa aghaghị ichebe onwe ha.
Ọ bụ ezie na a na-emechikarị Internetntanetị na Alaeze Eswatini, ndị Umbutfo Eswatini Defense Force (UEDF) agwala mba Eswatini na ọ ga-abụ mba na-ahụkarị na mba niile n'ihi ọgba aghara na-aga n'ihu ugbu a, mwakpo ọkụ na akụ na nke ọha, ịnapụ ndị mmadụ ihe, na-egbu mmadụ, ma na-egbu ndị nkịtị.
Ndi agha Umbutfo Eswatini bu ndi agha nke ndi agha nke Southern African Kingdom nke Eswatini. a na-ejikarị eme ihe n'oge mkpesa ụlọ, yana ụfọdụ ókèala na ọrụ ụtụ; agha ahụ etinyebeghị aka na esemokwu mba ọzọ.
Times nke Swaziland bipụtara na Sọnde: Onye isi ya bụ Eze bụ ọchịagha na UEDF. Mgbe mbụ ndị agha ahụ hụrụ n'okporo ámá obodo ahụ bụ na Tuesday mgbe ndị ngagharị iwe gara mwakpo ma tinye ihe onwunwe, gụnyere ụlọ na gwongworo na-ebuga ngwa ahịa dị iche iche, ọkụ.
Ọnụnọ a rịrị elu ọbụna n'obodo, ebe ịpụnara ụlọ ahịa na igbochi okporo ụzọ site na iji okwute, ndekọ na ebe a na-ekpofu ihe wee bụrụ usoro nke ụbọchị ahụ. Nyaahụ, UEDF onye na-ahụ maka mmekọrịta ndị mmadụ bụ Lieutenant Tengetile Khumalo, na ọchịagha nke ọchịagha General Jeffrey Tshabalala, kwuru na 'ndị nchekwa agbachiterela ọnọdụ ọjọọ ahụ'.
O kwuru na nke a bụ na mmezu nke iwu ndị agha, nke, n'etiti ihe ndị ọzọ, bụ 'inyere ndị nkịtị aka ka ha kwado iwu na iwu n'oge ọnọdụ dị egwu dị ka nke a.
“UEDF nwere obi ụtọ isoro ndị niile emaSwati kerịta na kemgbe ha weghaara ọnọdụ a, udo adịla ọzọ. Ndị nchekwa agbachitere ọtụtụ ndụ na akụrụngwa nke ọma, bụ ndị nọ na mbibi nke ndị na-ere ọkụ na-enwu dịka 'ndị ngagharị iwe', "Khumalo kwuru. O kwusiri ike na UEDF ga-aga n'ihu na-arụ ọrụ ya bụ isi n'ichebe ndụ na ọbụbụeze nke Alaeze Eswatini. O kwuru na ha ga-eme nke a n'agbanyeghị agbanyeghị mkpọsa mgbasa ozi iji metọọ aha ụlọ ọrụ anyị.
Mgbasa ozi nzuzo ahụ, onye ọka iwu ahụ kwuru, dabere na ozi ha gbakọtara n'ụzọ siri ike na enwere ndị nnupụisi si mba ọzọ na-esonye na esemokwu a na-aga n'ihu, bụ ndị na-agbapụ ndị na-emeghị ihe ọjọọ ma na-atụgharị ụta ahụ n'aka ndị agha. “UEDF choro ịdọ aka na ntị, ndị a ka ha kwụsị mwakpo ha na-awakpo ha mgbe ụfọdụ na ndị nkịtị na-emeghị ihe ọjọọ na mwakpo ọkụ, iji zere iyi mkpuchi nke yiri nke anyị,” Khumalo kwuru.
Ọ gafere arịrịọ ndị agha na-arịọ maka mba ahụ ka ha kwado 'ndị agha anyị dị uchu na ala ma kwanyere ugwu niile gọọmentị setịpụrụ' Khumalo rịọrọ ndị nne na nna ka ha hụ na ụmụ ha nọrọ n'ụlọ ruo mgbe ọnọdụ ahụ niile gwuchara.
“N'ezie, ndị nne na nna kwesịrị ịdọ ụmụ ha aka ná ntị ka ha sonyere ndị a na-eme ngagharị iwe,” ka ndị agha ahụ bụ́ PRO kwuru. Khumalo gara n'ihu kwuo na ndị na-agbachitere nchebe na-achọkarị ịrụ ọrụ dịka o kwere mee, ya mere oku a na-akpọ ndị mmadụ ka ha kwado. O kwukwara, sị: “Nye ndị na-adịghị erube isi n’ihe anyị rịọrọ, ha ga-eche oké iwe nke ndị agha anyị ihu. Mba ekwesịghị ịtụ ụjọ. Ndị agha agbachitere dịịrị ijere mba ahụ ozi. ” Nkwupụta ndị agha ahụ na ọ bụ ebe ha weghaara n'okporo ámá obodo ahụ na-eme naanị otu ụbọchị mgbe Institute for Democracy and Leadership (IDEAL), nke bụ nzukọ na-enweghị uru, gbara akwụkwọ ngwa ngwa na Courtlọikpe Kasị Elu na-achọ iwu ka wepụ ndị agha n'okporo ámá.